निवर्तमान (Nibartaman) ||: July 2014
महाधिवेशन एक्सप्रेसः बुटवलदेखि काठमाण्डूसम्म
२०६५ सालमा ठूलो तामझाम, ठा“ट अनि व्यापक जनसहभागिताका साथ आफ्नो आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेले २०७१ सालसम्म आइपुग्दा अहिले काठमाण्डूमा आफ्नो नवौं महाधिवेशन एकदमै सादा रुपमा आयोजना गरिरहेको छ । पा“च वर्षअघि बुटवलमा ठूलो जनसहभागिता देखाएको एमालेले अहिले मध्य वर्षात्को समय भन्दै आम जनताको सहभागिताबिनै बन्द हलमा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौं भृकुटीमण्डपको बन्द हलमा भएको उद्घाटन सत्र हेर्न नपाएको झोंकमा आफ्नै कार्यकर्ताहरुले ढोकाबाहिर नाराबाजी मात्र गरेनन् किन्तु असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरुले पाहुनाको स्वागतका लागि निर्माण गरिएको गेट समेत तोडफोड गर्न पुगे । सुरक्षाकर्मीलाई भीड नियन्त्रण गर्न लाठी चार्जसमेत गर्नुपरेको दृष्य टेलिभिजनका पर्दा तथा अखबारका पानाहरुमा छरपस्ट हुन पुग्यो । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले भनेझैं शायद ‘आफ्नो प्यारो पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन हेर्न नपाउ“दा’ कार्यकर्ताहरु रुष्ट हुनु अस्वभाविक होइन तर, ‘हाइटेक’ प्रविधियुक्त भनिएको महाधिवेशनमा आफ्नै सीमित कार्यकर्ताहरुको पनि व्यवस्थापन भएको देखिएन ।
महाधिवेशन हलभित्र एमाले नेताहरुले ‘राजनीतिक रुपान्तरण, संविधान निर्माण र आर्थिक क्रान्ति’ का कुरा गरिरह“दा हलबाहिर भने आक्रोशित कार्यकर्ताहरु तिनै नेताहरुको विरुद्धमा नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । तिनको प्रदर्शन हेर्दा कतै सरकारविरोधी आन्दोलन त छेडिएन भने झैं प्रतीत हुन्थ्यो । खासगरी आफ्ना सम्मेलन तथा महाधिवेशनलाई राजनीतिक दलले धेरै भन्दा धेरै जनता उतारेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलोको रुपमा लिने गर्दछन् र सामान्यता कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रलाई खुल्ला रुपमा गर्ने गरिन्छ । तर, ‘हाइटेक’ शैली पच्छ्याएको एमालेले त्यसको ठीक विपरित ढंगबाट आफ्नो नवौं महाधिवेशनको उद्घाटन ग¥यो । एमालेले नया“ प्रयोग ग¥यो । तर, नया“ प्रविधिले प्रचारमा ल्याइए जस्तो सफलता हासिल गर्न सकेन । अनि उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता र सांगठनिक सक्षमता भएको भनिएको पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन निकै फितालो साबित भयो ।
एमालेको यो नया“ प्रयोगलाई एक हदसम्म प्रशंसनीय मान्नुपर्ला । तर, एमालेले प्रयोग गरेको ‘हाइटेक’ प्रविधि आफैंमा पूर्ण थियो वा त्यो एउटा खेलौनाजस्तो हुन पुग्यो त्यो एमालेगणले नै संश्लेषण गर्ने विषय हो । आणविक अस्त्रहु“दै दैनिक जीवनमासमेत यन्त्रमानवको प्रयोग गर्ने विदेशीहरुका सामु रिमोर्टबाट सञ्चालित चारवटा पंखेटा भएको खेलौना हेलिकप्टरबाट कागजका टुक्रा खसाल्ने र विद्युतीय ढोका (वाक थु्र डोर) राख्नुलाई नै ‘हाइटेक’ मान्ने हो भने कुरा अर्कै हो नत्र भने हाइटेकको प्रचारवाजी केवल मनोरञ्जनात्मक मात्रै बन्न पुग्यो । अघिल्लो महाधिवेशनमा निकै ठूलो तामझाम र कार्यक्रम स्थलको निकै सिंगारपटार गरेको एमालेले यसपटक भने निकै ‘सादा’ कार्यक्रम गरेको देखियो । यदि एमालेले आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने शैलीलाई मितव्ययी बनाउन यसो गरेको हो भने यो सराहनीय कदम हो ।
बुटवल महाधिवेशनमा एमालेले सम्पूर्ण मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई एकठाउ“मा जुटाएर सबैलाई आ–आफ्ना विचार र दृष्टिकोण राख्ने साझा मञ्च उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबेला सबैजसो मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको उपस्थिति थियो । तर, यसपटक त्यसो हुन सकेन । केही एकाध सानादलहरु बाहेक मुख्य गरी ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता देखिएन । अघिल्लो पटक सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई उच्च सम्मान दिएर राजनीतिक सहमतिको संस्कृृतिको विकास गर्ने कार्यमा एउटा इ“टा थप्ने काम गरेको थियो, तर यसपटक त्यो ईंटा पनि मक्किएर झरेझैं भयो ।
तुलनात्मक रुपमा एमालेको आठौं महाधिवेशन भित्री र बाहिरी रुपमा जत्तिको तामझाम र आकर्षण थियो यसपालीको महाधिवेशनमा त्यो निकै कम देखियो । उद्घाटन सत्रमै स्वयं एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाहेक अरुलाई निषेध गरिएको तर ‘हाइटेक’ शैलीमा प्रचारवाजी गरिएको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र त्यत्ति जमेको देखिएन । यद्यपि एउटा कुरामा भने यो महाधिवेशनले विगतको रेकर्ड तोड्यो, त्यो हो नेतृत्व चयनका लागि बनेको गुटबन्दी । हुन त एमालेले बुटवल महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्वको चयन गर्ने परिपाटीको विकास गरेको थियो, र त्यसै अनुसार केन्द्रदेखि गाउ“ कमिटिसम्म त्यही पद्धती अनुसार नेतृत्व चयनको अभ्यास गरिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नहरु ओइरिरहेको अवस्थामा एमालेको त्यो अभ्यासलाई सराहनीय कदम मान्नुपर्छ । तर, त्यो अभ्यास यति विकृत हुन पुगेको छ कि त्यसले तलैदेखि स्थायी गुट निर्माण गर्ने संस्कारको विकास गरेको छ ।
बुटवल महाधिवेशनको अर्को सकारात्मक पक्ष युवा नेतृत्वको छनौट र धेरै हदसम्म समावेशी चरित्रको केन्द्रीय कमिटीको निर्माण थियो । यो सकारात्मक पाटोलाई यसपाली पनि कायम राख्छ कि राख्दैन त्यो नेतृत्व चयनपछि नै देखिनेछ । यद्यपि घोषित रुपमै दुईवटा प्यानल खडा गरी नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले यो विशेषतालाई यसपटक जारी राख्ने संभावना न्यून देखिन्छ । त्यसो त बुटवल महाधिवेशनबाट बुटवलबासीलाई एउटा कुराले अत्यन्तै राहत मिलेको थियो । त्यो हो तत्कालीन समयमा महाधिवेशन अवधिभर बुटवलमा विद्युत आपूर्तिमा कटौती अर्थात् लोडसेडिङ्ग भएको थिएन । अहिले काठमाण्डूबासीहरुले त्यो अनुभव गर्न पाएका छन् वा छैनन्, थाहा भएन । नत्र, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र विचारको हिसाबमा बुटवल महाधिवेशन भव्य भैकन पनि बा“झै हुन पुगेको थियो ।
किनकि अघिल्लो महाधिवेशनबाट अपेक्षा गरे अनुरुप शोषीत, पीडित, विपन्न वर्ग लगायत आम जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व तहबाट कुनै नया“ र ठोस नीति आउन सकेको थिएन । गएको महाधिवेशन फगत ‘जबज’को रहस्यमयी ब्रम्हाण्डमै सीमित हुन पुग्यो । यसपालीको उद्घाटन सत्रमा नेताहरुले बोलेका कुरा र महाधिवेशनस्थलबाहिर राखिएको एमालेका पूर्व महासचिव स्व. मदन भण्डारीको विशाल तस्बिर र हलभित्र पनि राखिएका तस्बिरहरुले यसपटक पनि एमालेको सैद्धान्तिक र वैचारिक खुराक त्यही जबजकै ब्रम्हाण्ड वरिपरी घुमेको देखिन्छ । अब एउटा स्वभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, के यसपटक एमालले आम रुपमा अपेक्षा गरिए अनुसार मुलुकको समसामयिक राजनीतिमा कुनै नया“ र दुरगामी महत्व राख्ने विचार पस्किन सक्छ ? दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले आम कार्यकर्ता तथा नेपाली जनतालाई सोचेभन्दा फरक ढंगले कुनै विचार प्रदान गरी राजनीतिक गुण लगाउन सक्छ ?
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनदेखि नै गुटगत समीकरण निर्माण भएको र महाधिवेशनको मुख्य मुद्दा नै नेतृत्वको चयन भएको हु“दा वैचारिक रुपमा विगतमा जस्तै एमाले महाधिवेशन बा“झै रहने संभावना देखिन्छ । तथापि बुटवल महाधिवेशनमा घनश्याम भुसाललगायतका केही युवा पुस्ताका नेताहरुले अघि सारेको नेपाली समाजको अवस्था र क्रान्ति सम्बन्धी वैचारिक बहसलाई निरन्तरता दिंदै नेपाली समाज अब २००६ सालदेखि भनिदैं आएझैं अर्धसामन्तवादी र अर्धऔपनिवेशिक नरहेको अपितु यो नेपाली समाज अब पूर्णतया पू“जीवादी समाजमा रुपान्तरित भइसकेको भन्ने बहसले ठूलो स्थान लिएको छ । यस दिशामा एमाले महाधिवेशनबाट मूलतः नेपाली समाजको बनावट र यसको चरित्रको नया“ व्याख्यासहित पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजहरु परिमार्जित हुने संभावना देखिएको छ ।
खासमा गएको २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलाई एमालेले राजनीतिक क्रान्तिको रुपमा परिभाषित गर्दै अब मुलुक आर्थिक क्रान्तितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । यसअघि ६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेभित्र एकरुपता थिएन । विगतदेखि नै समकालीन राजनीतिमा एमालेको धार भनेकै प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ । प्रतिक्रियात्मक धारले कुनै नया“ संभावनाको जन्म दिन सक्दैन । वर्गीय हिसाबले अब एमाले मजदुर, किसार, अर्धसर्वहारा र सर्वहारा वर्गको पार्टी नरहेको भन्ने जुन आरोप थियो र छ, त्यसलाई शायद एमालेले पुष्ट्याईं गर्न खोजिरहेको छ । साम्यवादको लक्ष्यलाई छाड्ने कुरा यसैको पुष्टि पनि हो शायद । यदाकदा एमाले अब मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी नरहेको अवस्थामा एउटा सशक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन थालेको छ । वास्तवमा एमालेले आफूलाई घोषित रुपमै कम्युनिष्ट पार्टीको लाइनबाट समाजवादी पार्टीको रुपमा विकास गर्दा वर्गीय चरित्र पनि मिल्ने र मूलतः दक्षिणपन्थी मानिने पार्टीहरुको सफ्ट विकल्पको रुपमा काम गर्ने संभावना आउंथ्यो कि ? यदि साम्यवादको लक्ष्य छाड्ने हो भने एमालेले आफूलाई घोषित रुपमै प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । किनकि त्यसो गर्दा कम्तीमा उसले आजीवन कम्युनिष्टको भूत मन्साउने कर्मकाण्ड गर्नु पर्दैन ।
त्यसो त एमालेमा मुख्य समस्या भनेकै वैचारिक समस्या हो । जिनेटिक हिसाबले एमाले कम्युनिष्ट पार्टी त हो तर, यसका नीति, कार्यक्रम र कार्यक्रमिक नाराहरु दलाल प“ूजीवाद र नवउदारवादी अराजकतालाई मलजल गर्ने प्रकृतिकै छ । अनि एमाले पार्टीको वर्गीय स्वार्थ मध्यम वर्गकै हुन पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको वर्गविभाजनमा खासै भिन्नता देखिंदैन । पछिल्लो समयमा एकहदसम्म नेपालका सबै पार्टीहरु व्यवाहारिक रुपमा एकै जस्ता देखिएका छन् । अब एमाले सा“च्चिकै भन्ने हो भने हुनेखाने मध्यम वर्गकै पार्टी बन्न पुगेको छ । यसर्थ, एमालेले अब आफ्नो पार्टीको झण्डा र नाम पनि फेर्नुपर्छ भन्ने खालका बहस पनि हुन थालेका छन् । यही बहसलाई टेवा पुग्नेगरी महाधिवेशनको ब्यानरमा माक्र्सवादी र लेनिनवादी पार्टीले माक्र्स र लेनिनका तस्बिरहरु राखेन । यद्यपि यसमा ती तस्बिरहरु राख्नैपर्छ भन्ने त केही छैन तरपनि कम्युनिष्ट पार्टी भएको नाताले पनि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रवर्तकहरुलाई सम्झिनै नखोज्नाले मूलतः एमालेको वर्गीय उत्थानलाई नै संकेत गर्दछ ।
२०६५ सालको बुटवल महाधिवेशनबाट काठमाण्डूसम्म आइपुग्दा आधारभूत रुपमा एमालेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन देखा परेको छैन । पार्टीभित्रको लडाईं विचार, सिद्धान्त भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रीत हुन गएको छ । अब हेर्न बा“की छ कि वैचारिक खडेरिले बा“झो भएको भूमिमा वर्षात्स“गै सुरु भएको नवौं महाधिवेशनले विचारको हरियाली लहराउन सक्छ या सक्दैन । यदि एमालेले आफूलाई यसपाली पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले स्पष्ट पार्न सकेन र पुरानै मझधारमा उभ्यायो भने विगतमा जस्तो चुनावी मत त पाउला नै तर, समकालीन राजनीतिमा एमाले वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सक्दैन । अनि विगतमा झैं काठमाण्डू महाधिवेशन पनि वैचारिक रुपमा बा“झै ठहर्नेछ ।
दैनिकपत्र दैनिकमा मिति २०७१ असार २३ गते प्रकाशित
संभावनायुक्त ‘ग्रेटर वीरगंज’
सामान्यतया विदा वा फुर्सदको समयमा घुमफिरको योजना बनाउने गरे तापनि कतिपय अवस्थामा अप्रत्यासित र अपर्झट हुने घुमफिर निकै रोमाञ्चकारी र अविश्मरणीय हुने गर्दछ । त्यस्तै एकदिने वीरगंज भ्रमण अप्रत्यासित एवं अविश्मरणीय भयो । शुक्रबार साँझ जगत पोखरेलजीले भोलि बिहान वीरगंज जाने है भनी प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसै त मध्य ग्रीष्मको खपिनसक्नु गर्मी, त्यसमाथि वीरगंजमा गएर गर्मीको मात्रा थप किन गर्नु ? मैले यो प्रचण्ड गर्मीमा वीरगंज किन जानु भन्ने विचार गर्दै पछि निर्णय दिने भनें । तर, त्यो भ्रमणमा पहिलेकै टोली अर्थात् यसै दैनिकका वरिष्ठ सम्पादक डीआर घिमिरे एवं सेवा विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुख महेश काफ्ले पनि सम्मिलित हुने र त्यो एकप्रकारले व्यवसायिक एवं अवलोकन भ्रमण हुने भन्ने जानकारी पाएपछि मलाई पनि वीरगंज जाने चाहना भयो । त्यसो त वीरगंज मेरालागि नौलो ठाउँ थियो । र, यो यात्रामा मेरो वीरगंजको टेकाई नितान्त नूतन हुने थियो ।
भोलिपल्ट बिहान शनिबार अलि ढिला नै भयो । शनिबार भनेपछि अलि हलुका हुने दिन भएरै होला खासै बिहान चाँडै उठ्ने जाँगर पनि चल्दैन । त्यही भएर शनिबार अलि ढिलासम्म सुत्ने नै भइयो । फेरि अहिले विश्वको अर्को गोलाद्र्धमा विश्वकप फुटबलको महामेला चलिरहेको र यहाँको स्थानीय समय अनुसार त्यो खेल सबै राति नै हुने हुनाले यसो बिजुली बत्तिको चाँजोपाँजो मिलेको खण्डमा राति आक्कलझुक्कल फुटबल पनि हेरिने नै भइयो । तर पनि अधिकांश समय त हेर्दाहेर्दै झुलेर न अगाडिको थाहा हुने न पछाडिको पनि हुन्छ । अनि खेलको अन्तिम परिणामको पुनः भोलिपल्ट बिहान प्रशारण हुने हाइलाइट हेर्नुपर्ने बाध्यता पनि यथावतै छ । त्यो पनि बिजुली बत्तीले साथ दिएको खण्डमा मात्रै । नत्र रातभरी फुटबल हेर्दा पनि परिणाम पर्सिपल्ट मात्र अखबारमा हेरेर थाहा पाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस मानेमा चालू विश्वकपको २० औं संस्करणले फुटबल पे्रमी नेपालीहरुको निद्रा ध्वस्त भएको र अबको अझै आधा महिनासम्म पनि यो प्रक्रियाबाट त्राण नपाउने अवस्था छ । त्यही विश्वकपको ह्याङओभरले पनि शनिबार बिहान चाँडै उठ्ने कुरै भएन ।
करिब छ बजेतिर उठेर एकपटक वीरगंज जाने टोलीको यात्रा अवस्थाबारेमा जानकारी लिने विचार गरेर जगत पोखरेलसँग सम्पर्क गर्न कोशिस गरें तर उहाँको फोन व्यस्त भयो । त्यसपछि डीआर घिमिरेसँग सम्पर्क गर्दा उहाँहरु हिंड्नै लागेको बताउनुभयो र मलाई पनि जाउँ भन्नुभयो । यसो विचार गर्दा मेरालागि वीरगंज नौलो ठाउँ भएको हुँदा वीरगंज घुम्ने यो अवसर पनि हो भन्ने सोचेर म पनि सम्मिलित हुने कुरा व्यक्त गरें र म तयार भएर निस्किएँ । यसपटकको यात्रा मेरा कारणले निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिला हुन पुग्यो । त्यसो त हामी समयमा निकै पछाडि छौं । एकाध घन्टा ढिला हुनु हाम्रा लागि अति सामान्य भइसकेको अवस्थामा समयको सवालमा हामी निकै बहस पनि गरिरहन्छौं । यसपटक पनि यात्रावधि भरी त्यही आधा घण्टा ढिला भएको विषयमा निकै रमाइलो घोचपेच पनि भयो । जेहोस् हामी वीरगंजको लागि बुटवल छाड्दा त्यस्तै साँढे छ जति बजेको थियो । बुटवलबाट पूर्व लाग्दा त्यही पुरानो दृष्यहरुले उपस्थिति जनाइरहेका थिए । हामीसँगसँगै यात्रारत केही बादलका टुक्राहरुले आकाश ढाक्ने चेष्टा गरिरहँदा हामीलाई भने बिहानै देखि चर्किने बुटवल वरिपरीको चिच्याहट मौसममा केही राहत मिलेको अनुभूति भएको थियो ।
जसै हामी दाउन्ने पुग्यौं, सामान्य चियानास्ताको लागि हामी रोकियौं र बिहानको चिया नास्ता ग¥यौं । चिया नास्तापछि हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी नै रह्यो । जतिजति पूर्वलाग्दै गर्दा दिन पनि चढ्दै जाने र गर्मीको पारो पनि चढ्दै जाने अवस्था भयो । यद्यपि वातानुकूलित गाडीमा यात्रारत रहँदा बाहिरी वातावरणको रापिलो घाम र सडकको पिच तातेर चल्ने तातो हावाको अनुभव गर्न परेन । वातानुकूलित गाडीमा यात्रारत रहँदै गर्दा शायद मानिसले वातानुकूतिल घर, गाडीमा बसेर बाहिरको वातावरणको महशुस गर्न नसकेको जस्तै जनताको पहुँचबाट माथि पुगेका नेताहरुले पनि जनताको हैसियत र उनीहरुको आवश्कता महशुस गर्न नसकेको होलान् भन्ने विचार मनमा पलायो । यद्यपि आजको वातानुकूलित यात्रा भने क्षणभंगुरका लागि मात्रै थियो त्यसैले भोलिका दिनमा फेरि त्यही गर्मीको उच्चाटलाग्दो यथार्थसँग साक्षात्कार गरिने हुनाले कम्तीमा मेरो लागि यथार्थबोध नहुने कुरै थिएन ।
हेटौंडा पुग्दा त्यस्तै १२ बजेको थियो । बार बजेको प्रचण्ड गर्मीमा पनि हेटौंडामा भने निकै शीतल अनुभव भयो । मध्यान्न भइकन पनि वादलको पातलो सतहले हेटौंडाको अधिकांश आकाश छोपेको हुनाले र हेटौंडाको हरियालीयुक्त वातावरणले सहर त्यति धुपिलो र रापिलो थिएन । फेरि नेपालकै सफा सहरको उपाधि पाएको हेटौंडा आफैंमा सुन्दर सहर पनि हो । सुन्दर भएकै हुनाले शीतलताको अनुभूति हुने नै भयो । जस्तो कि लुम्बिनी पुग्दा जस्तै धूपमा पनि शीतलताको अनुभूति भए भएजस्तो । आखिर गर्मी र शीतलता पनि अनुभूति गर्ने कुरा न हुन् । पछिल्लो समयमा हेटौंडा बजारमा फिलिलि गुडिरहेका विद्युतीय रिक्साले जोकोहीको ध्यान खिच्ने रहेछ । ‘मयूरी’ र ‘सारथी’ नामका विद्युतीय रिक्सा प्रदूषणरहित हुनुको साथै पारम्परिक रिक्सामा जस्ता शारीरिक श्रम आवश्यक नपर्ने र ८ जनासम्म यात्रा गर्न मिल्ने रहेछ । यो रिक्साको संभावना बुटवलमा पनि धेरै देखिएको महशुस गरेरै खासमा यसैको अवलोकन र बुटवलमा भित्र्याउने सोचका साथ यो भ्रमण भएको थियो । बुटवललाई बढ्दो सवारी चापबाट मुक्त गराई स्वच्छ, सफा, सुन्दर र हराभरायुक्त बुटवल बनाउने अभियानमा विद्युतीय रिक्सा निकै उपयुक्त हुने देखिन्छ । अहिले बुटवलमा पनि यो रिक्साको सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । जब हेटौंडाबाट पूर्व लागियो, यो भूगोल भने मेरा लागि नितान्त नौलो थियो । यसअघि पनि पटकपटक हेटौंडासम्मको यात्रा भए पनि त्यसपूर्वको यात्रा भने भएको थिएन । नयाँ ठाउँको यात्रा गर्दैगर्दा मेरा नजर भने त्यहाँको भूगोलको तस्बिर आँखामा कैद गर्न आतुर हुन्छन् । हेटौंडापूर्व बाराको अमलेखगञ्जसम्म खासै मानववस्ती देखिएन । चुरेको फेदैफेद जंगलको बाटो हुँदै अमलेखगञ्ज पुगिने रहेछ । अमलेखगञ्ज त्यत्ति ठूलो बस्ती रहेनछ ।
बाराको पथलैयाबाट हामीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग छाडेर हामी दक्षिणतर्फ मोडियौं । अबभने औद्योगिक नगरी सुरु भएको महशुस भयो । सडकका वरिपरी लहरै रहेको विभिन्न उद्योग, कलकारखानाहरुले नेपालमा पनि औद्योगिक विकासको संभावना रहेछ भन्ने महशुस गरायो । त्यस्तै करिब आधाघण्टाको यात्रापछि हामी नेपालको औद्योगिक एवं वाणिज्य नगरी वीरगंज पुग्यौं । वीरगंज पुग्दै गर्दा सडकका दायाँबायाँ फालिएका फोहोर र खुल्ला नालिबाट बगिरहेको ढलले अलि दुर्गन्धित लाग्दथ्यो । मुलुककै सफा सहर हेटौंडाहुँदै वीरगंज जाने जोकोहीलाई त्यहाँको अव्यवस्थित सडक अनि बजार क्षेत्रमा गरिएका अव्यवस्थित पार्किंग, त्यसमाथि प्रचण्ड गर्मीका कारण चिम्सा आँखा बनाएर हुर्नुपर्ने बाध्यताले वीरगंजप्रतिको धारणा पूरै बदलिने देखियो ।
यतिहुँदाहुँदै पनि वीरगंजको आफ्नै महत्व र इतिहास छ । वास्तवमा वीरगंज नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा उल्लेख्य इतिहास बोकेको पुरानो सहर हो । २००७ सालको क्रान्तिमा वीरगंजको भूमिका निकै रणनीतिक रहेको कुरा हामीले इतिहासमा पढ्दै आएका हौं । त्यसैगरी क्रान्तिकै क्रममा थिरवम मल्ल र तेज बहादुर अमात्य सहिद भएको इतिहासका बारेमा त्यहाँकै एक अगुवा एवं प्राध्यापक डा. दीपक शाक्यले जानकारी दिनुभयो । शाक्यले नै हामीलाई वीरगंजका अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरुको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो ।
वीरगंज नेपालको लागि पहिलो र महत्वपूर्ण आर्थिक नाका हो । भारतीय बजारबाट सजिलो, छिटो, सहज र सस्तो दरमा सामान ल्याउने एकमात्र नाका वीरगंज नाका हो । यसर्थ, नेपालको आर्थिक विकासमा वीरगंजको मुख्य भूमिका रहने गर्दछ । त्यसो त वीरगंज भन्सार नाकाबाट मात्रै मुलुकको करिब ४० प्रतिशत कूल राजस्व भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । त्यसैगरी वाणिज्य र औद्योगिक नगरी वीरगंजदेखि पथलैयासम्म औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास भएको छ । यद्यपि यहाँका उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरुको सचित व्यवस्थापन हुन नसकेको देखियो । वीरगंज व्यवसायिक क्षेत्र भएकोले विकासका अन्य दृष्टिकोणबाट वीरगंज निकै संभावनायुक्त हुँदाहुँदै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय विकासमा पछाडि रहेको प्रतीत हुन्थ्यो ।
वीरगंज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा कृषि उत्पादनको हिसाबमा संभावना युक्त स्थान हो । वीरगंजको संभावनाकै कुरा गर्ने हो भने नेपालकै एकमात्र सुख्खा बन्दरगाह वीरगंजमा छ । त्यसैगरी एकीकृत भन्सार कार्यालयले पनि यसको व्यवसायिक महत्व दर्शाएको छ । त्यसैगरी बाराको निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकले वीरगंजको संभावनालाई उजागर गर्दछ । वीरगंजको वैभव बढाउने र वीगरंजलाई नेपालकै नमूना सहर बनाउनको लागि ‘ग्रेटर वीरगंज’ घोषणाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र त्यो योजना अनुसार वीरगंजलाई औद्योगिक, यातायात, शैक्षिक, कृषि सहरको रुपमा व्यवस्थित गरिने योजना रहेको जानकारी प्राध्यापक शाक्यले दिनुभयो । ग्रेटर वीरगंज अन्तर्गत पूर्वपश्चिम बाराको कलैया देखि विन्दवासिनीसम्म तथा उत्तरदक्षिण पथलैयादेखि रक्सौलसम्मको भूगोल समेटिने र सन् २०५० सम्ममा वीरगंजलाई आधुनिक सहरको रुपमा व्यवस्थित गरिने योजना रहेको जानकारी पनि उहा“ले दिनुभयो । वीरगंजको यिनै यथार्थ र संभावनाको जानकारीका साथ हाम्रो यात्राले विश्राम लियो । यात्राका क्रममा हामीलाई वीरगंज तथा हेटांैडामा आत्मीय आतिथ्यता प्रदान गर्ने नेपाल जेसिसका साथीहरु एवं समग्र वीरगंजको यथार्थ जानकारी र संभावनाको बारेमा जानकारी दिनुहुने डा. शाक्यलाई हार्दिक धन्यवाद ।
Published at: Dainikpatra Daily